झाक्री फसाउन षड्यन्त्र गरिएकै हो त? झाक्रीको थानमा थुक्ने युवा मानसिक रोगी हैन शिक्षक हो भन्दै गाउकै मान्छे मिडियामा, २ वटा स्कुल पढाउछन, अन्ततः खुल्यो नसोचेको भित्री रहस्य (भिडियो सहित) - नेपाली खोज
झाक्री फसाउन षड्यन्त्र गरिएकै हो त? झाक्रीको थानमा थुक्ने युवा मानसिक रोगी हैन शिक्षक हो भन्दै गाउकै मान्छे मिडियामा, २ वटा स्कुल पढाउछन, अन्ततः खुल्यो नसोचेको भित्री रहस्य (भिडियो सहित)
भाइरल झाक्री जेल परेका छन । थानमै थुक्ने आफ्ना सबै लुगा फुकालेर सारै नराम्रो हर्कत गरेपछी सबै भागाभाग भएको थियोे । थानमा थुकेर लुगा खोल्ने युवाको गाउमा पुग्दा यस्तोसम्म भनेका छन कि सुनेर सबै चकित बनेका छन । केही समय अघिदेखि मोरङमा धेरै युवतीहरु बिरामी पर्दै मुर्छा पर्न थालेपछी धेरै झाक्रीले चिन्ता बसे तर कसैले पत्ता लगाउनै सकेनन ।
केहि दिन अगाडी झाक्रीको थानमा एक युवक आएर थानमै थुकेर आफ्ना शरीरमा भएका कपडा खोलेर झाक्री र माताहरुलाई थुकेर सारै नराम्रो हर्कत गरेपछी केही नगरी त्यहाबाट केही नगरी फर्काएपछी पुन दोश्रो पटक त्यहा ती युवा र उनका दाजुसहित पुगेपछी फेरि त्यस्तै हर्कत गर्न थालेपछी झाक्री र माताहरुले झाक्रीको विधि अनुसार खुकुरी नचाउदै माताहरुले कुटपिट गरेको भिडियो सबैमाझ आएको थियोे ।
त्यससँगै झाक्रीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । त्यो दिनको घटनाको बारेमा माताहरु र झाक्रीले सम्पुर्ण कुराहरु बताएका छन । झाक्रीलाई फसाउन यस्तोसम्मको षड्यन्त्र गरियो भन्दै माताहरुले यस्तोसम्म सुनाए कि सुनेर सबै छक्क परे । ती युवाले थानमै लुगा खोलेर यस्तोसम्म हर्कत गरेको खुलासा भएको छ ।
झाक्रीलाई षड्यन्त्र गरि फसाएको भन्दै गाउँ नै उर्लीयो झाक्रीको पक्षमा । त्यो दिन युवाले थानमै यस्तोसम्म गरेको खुलासा । प्रत्यक्ष Live देख्ने गाउँलेहरु एकसाथ मिडियामा आएर खोले सुरुदेखिको सम्पुर्ण नालीबेली बताएका थिए । तीन सय घरधुरी रहेको गाउँ नै झाक्रीको पक्षमा उभिएको र झाक्रीको लागि जे गर्न पछि नहट्ने बताका थिए। जेल पर्नुको डरलाग्दो भित्री खेल यस्तो रहेछ ।
थानमा थुक्ने अनि लुगा खोलेर अनेक गर्ने युवाको मानसिक रोगी नभएको भन्दै गाउँलेहरुले यस्तोसम्म सुनाए कि सुनेर सबै चकित बनेका छन । ती युवाले २ वटा स्कुल पढाउने गरेको अनि उनलाई मानसिक रोगी भन्ने मान्छे नै रोगी हो भन्दै गाउँलेहरु जङ्गिएका छन ।को हुन त थानमा थुकेर लुगा खोल्ने युवा?,झाक्री फसाउने षड्यन्त्र नै भएको हो त! ? तलको भिडियोमा हेर्नुहोला सबै चकित हुनुहुनेछ ।
विद्युत् महसुल वापत २१ करोड सङ्कलन
महामारी थप फैलिन नदिन इजरायलमा पुनः लकडाउन हुने